23 Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ nnipakuw no ne n’asuafo no+ sɛ: 2 “Mose agua so na akyerɛwfo+ ne Farisifo no te.+ 3 Enti nea wɔka+ kyerɛ mo nyinaa, munni so na monyɛ, nanso monnyɛ wɔn nnwuma,+ efisɛ wɔka nanso wɔnyɛ. 4 Wɔkyekyere nnesoa a emu yɛ duru de to nnipa mmati so,+ nanso wɔn de wɔmpɛ sɛ wɔde wɔn nsateaa mpo ka.+ 5 Nnwuma a wɔyɛ nyinaa, wɔyɛ sɛnea nnipa behu;+ wɔyɛ kyerɛwsɛm kotoku*+ a wɔde bɔ wɔn ho ban no atɛtrɛtɛ, na wɔyɛ wɔn ntade ano+ akɛse. 6 Wɔpɛ mpanyin tenabea+ wɔ anwummeduan ase ne hyiadan mu nkongua a ɛwɔ anim no,+ 7 ne gua so nkyia+ ne sɛ nnipa bɛfrɛ wɔn Rabi.+ 8 Nanso ɛnsɛ sɛ wɔfrɛ mo Rabi, efisɛ obiako ne mo kyerɛkyerɛfo,+ na mo nyinaa yɛ anuanom. 9 Bio nso, mommfrɛ obiara mo agya asase so, na obiako ne mo Agya,+ Ɔsorosoroni no. 10 Afei nso ɛnsɛ sɛ wɔfrɛ mo ‘akannifo,’+ efisɛ mo Kannifo yɛ biako, ɔne Kristo. 11 Mmom no, ɛsɛ sɛ nea ɔyɛ mo mu kɛse no yɛ mo somfo.+ 12 Obiara a ɔma ne ho so no wɔbɛbrɛ no ase,+ na obiara a ɔbrɛ ne ho ase no wɔbɛma no so.+ 13 “Munnue, akyerɛwfo ne Farisifo nyaatwomfo! efisɛ moto+ ɔsoro ahenni mu wɔ nnipa anim; mo+ a monkɔ mu, na wɔn a wɔrekɔ mu no nso momma wɔn kwan. 14 —— 15 “Munnue, akyerɛwfo ne Farisifo nyaatwomfo!+ efisɛ mufi adi kɔ po ne asase kesee so kɔsakra obi, na onya sakra a, moma ɔbɛfata ma Gehenna mmɔho abien sen mo ankasa. 16 “Munnue, akwankyerɛfo anifuraefo+ a moka sɛ, ‘Sɛ obi ka asɔrefie no ntam a, ɛnyɛ hwee, na sɛ ɔka asɔrefie hɔ sika no ntam a, asodi da no so.’+ 17 Nkwasea ne anifuraefo! Nea ɛwɔ he na ɛyɛ kɛse, sika no anaa asɔrefie a atew sika no ho no?+ 18 Afei nso, ‘Sɛ obi ka afɔremuka no ntam a, ɛnyɛ hwee; nanso sɛ obi ka ɛso ayɛyɛde no ntam a, asodi da no so.’ 19 Anifuraefo! Nea ɛwɔ he na ɛyɛ kɛse, ayɛyɛde no anaa afɔremuka+ a ɛma ayɛyɛde no ho tew no? 20 Enti obiara a ɔka afɔremuka no ntam no, ɔka ɛno ne ɛso nneɛma nyinaa ntam; 21 na nea ɔka asɔrefie no ntam no, ɔka ɛno ne nea ɔte mu no ntam;+ 22 na nea ɔka ɔsoro ntam no, ɔka Onyankopɔn ahengua+ ne nea ɔte so no ntam. 23 “Munnue, akyerɛwfo ne Farisifo nyaatwomfo! efisɛ muyi ɛme ne onunum ne kumin so ntotoso du du+ na Mmara no mu nsɛm a tumi wom a ɛne atɛntrenee+ ne mmɔborɔhunu+ ne nokwaredi no de, momfa nyɛ hwee.+ Eyinom na ɛyɛ asɛde sɛ anka moyɛ, na mummmu mo ani nngu nneɛma foforo no so. 24 Akwankyerɛfo anifuraefo+ a mosɔn nneɛma so yi nwansena+ nanso momene yoma!+ 25 “Munnue, akyerɛwfo ne Farisifo nyaatwomfo! efisɛ mohohoro kuruwa+ ne ayowa ho, nanso emu de, afowde+ ne adifudepɛ ayɛ no mã. 26 Farisini onifuraefo,+ hohoro kuruwa+ ne ayowa no mu kan, na ama ɛho nso afi. 27 “Munnue, akyerɛwfo ne Farisifo nyaatwomfo!+ efisɛ mote sɛ adamoa a wɔaka ho fitaa+ a ɛho yɛ fɛ, nanso emu de, awufo nnompe ne afide ahorow nyinaa ayɛ no mã. 28 Saa ara na mo nso, nnipa ani so de, mote sɛ treneefo,+ nanso nyaatwom ne mmarato ayɛ mo mã. 29 “Munnue, akyerɛwfo ne Farisifo nyaatwomfo!+ efisɛ moto adiyifo nna na musiesie treneefo ada,+ 30 na moka sɛ, ‘Sɛ na yɛwɔ yɛn agyanom bere so a, anka yɛremmoa wɔn mma wonhwie adiyifo no mogya ngu.’+ 31 Enti moredi adanse atia mo ho sɛ moyɛ wɔn a wokum adiyifo no mma.+ 32 Ɛnde, monhyɛ mo agyanom kuruwa+ mã. 33 “Awɔ, nhurutoa mma,+ mobɛyɛ dɛn aguan Gehenna atemmu?+ 34 Eyi nti, meresoma+ adiyifo ne anyansafo ne akyerɛkyerɛfo aba mo nkyɛn.+ Mubekum+ wɔn mu binom abɔ wɔn asɛndua mu, na mobɛka ebinom mpire+ mo hyia adan mu na moatan wɔn ani fi kurow so akɔ kurow so; 35 saa na ɛbɛma treneefo mogya a wɔahwie agu asase so nyinaa aba mo so,+ efi ɔtreneeni+ Habel+ mogya so kosi Barakia ba Sakaria mogya so, nea mukum no kronkronbea ne afɔremuka ntam no.+ 36 Nokwarem mise mo sɛ, nneɛma yi nyinaa bɛba saa awo ntoatoaso yi so.+ 37 “Yerusalem, Yerusalem, wo a wukum adiyifo+ no na wusiw wɔn a wɔsomaa wɔn wo nkyɛn no abo+​—hwɛ mpɛn dodow ara a mepɛe sɛ meboaboa wo mma ano, sɛnea akokɔbaatan boaboa ne mma ano ne ntaban ase!+ Nanso moampɛ.+ 38 Hwɛ! Wɔagyaw mo fie+ ama mo.+ 39 Na mise mo sɛ, efi saa bere yi rekɔ no morenhu me da kosi sɛ mobɛka sɛ, ‘Nhyira ne nea ɔba Yehowa din mu!’”+
^ Eyi yɛ adaka ketewa a kyerɛwsɛm wom a na Yudafo mmarima de bɔ wɔn moma so anaa wɔde to wɔn nsa de bɔ wɔn ho ban.